Caro ka dhalatay midab takoorkii xalay lagula kacay daafaca Chelsea - BBC News Somali
Son ayaa haraantiyay xiddiga Chelsea isagoo dhulka jiifa, VAR ayaa go'aamisay in qaladkaas uu u qalmay casaan toos ah.
Garsooraha ayaa kursiga keydka ugu tagay labada tababare ee Tottenham iyo Chelsea Jose Mourinho iyo Frank Lampard. Iyadoo codbaahiyaha laga yiri: "Fal cunsurinimo ah oo ay ku kaceen taageerayaasha ayaa hakad gelinaya ciyaarta."
Cayaaryahan Demba Ba oo midab takoor lagula kacay
Ururka Xirfadlayaasha Kubadda Cagta ayaa sheegay iney garab taagan yihiin cayaartooy walba oo la kulmo midab takoor waxayna sheegeen iney ka go'an tahay iney si wadaan dagaalkooda ka dhanka ah ee midab takoorka.
''Kubadda cagta waxay qeyb ka tahay dharka ay xirtaan bulshada reer Britain taasi oo sabab u ah in kubadda cagta laga dheelo Ingiriiska dunida aad looga taageero marka sidaa darteed waxaa ina saaran mas'uuliyadda ah inaan cunsuriyadda ka baabi'ino garoomada kubadda cagta ee UK''.